I-Berlioz 'Opera' Les Troyens 'I-Synopsis
I-Berlioz 'yesihlanu yoMthetho weFrench Opera
Ehlanganiswe ngo-1858, i-freetto kaHector Berlioz ' opera "Les Troyens" yabhalwa nguBercez ngokwakhe. Intsebenzo emihlanu ye-opera yesiFrentshi yayisekelwe kwimbongo kaVilil, "i-Aeneid." Ibali lwenzeka kwiTroy yakudala .
Les Troyens , UMTHETHO 1
Kwaphela iminyaka eyi-10, amaGrike ajikeleze iTrojans kodwa ngokukhawuleza wema. Ekugqibeleni, bevuya ngoxolo lwabo, abaseTrowa bayavuya; ngakumbi emva kokuba amaGrike ashiye ihashe elikhulu lenkuni ngaphandle kwesango lomuzi.
AmaTrojans akholelwa ukuba ngumnikelo owenziwe kumthikazi wabo, uPallas Athena. Nangona kunjalo, intombi kaKumkani uCamandra uCassandra, umprofetikazi, ikholelwa ukuba akukho nto iya kuvela kule horse. Uzama ukulumkisa uyise kunye nomlingane, uCoroebus, ukuba ihashe iya kuzisa inhlekelele phezu kukaTroy, kodwa ukuprofeta kwakhe kuya kukhululeka. UKoroebus unxusa uCassandra ukuba ajoyine kwimikhosi yabo, kodwa akakwazi. Uyamcela ukuba abaleke kuloo mzi, kodwa uKroebhe akawunikeli amaqhinga akhe.
Imibhiyozo iphela xa u-Andromaque, umhlolokazi kaCassandra umzalwana kaHector, ehambisa inqaku elibuhlungu malunga nombingeleli, uLaocoön. Ekholelwa ukuba ihashe ibe yinto ethile yokukhohlisa, iLaocoön yahlaba ihashe lentonga ngomkhonto wayo yabongoza abantu basezidolophini ukuba bayifake umlilo. Kamva kamva, wahlaselwa waza wadliwa yizinyoka ezimbini zaselwandle. U-Aeneas, umlawuli wekhosi yeTrojan, uyaqiniseka ukuba uLococoön ucaphukisa uPallace Athena kwaye ukuba ihashe kufuneka ifakwe ethempelini lakhe ngaphakathi kwesi sixeko.
UKumkani uyavuma kwaye uCassandra uvuma kwimibono yakhe yokufa nokutshabalalisa.
Les Troyens , ACT 2
Elele egumbini lakhe lokulala, u-Aeneas u tyelelwa ngumfo ka-Cassandra umntakwabo, uHector. U-Hector ubonisa uEneas ukuba ngelinye ilanga aqale isixeko esitsha saseTroy kwaye kufuneka asinde. Njengoko uHector ephela, u-Aeneas uyavuswa ngumhlobo wakhe uPanhee.
Ukulimala ngamajoni aseGrike efihliwe ngaphakathi kwehashe leenkuni, i-Panthee briefs I-Aeneas yeemeko eziphazamisayo.
Kwiindonga zebhotwe, iCassandra kunye neqela elikhulu labesetyhini baseTrojan banithandazela ngoncedo lukaThixo. UCassandra uprofeta ukuba u-Aeneas kunye namanye amagosa asele aphunywe ngengcebo enkulu apho aya kufumana isixeko esitsha e-Italy. Iqela lala mabhinqa livuma ukuba limele liphulaphule uCassandra ngaphambili, kwaye emva koko ubabuza ukuba bakulungele ukufa. Ezinye zabasetyhini azinjalo, ngoko uCassandra uyazigxotha. Abasetyhini abaseleyo bafunga omnye komnye ukuba xa bejamelene nabo baya kufa nabesifazane ngaphandle kokudlwengulwa okanye babulawa ngamajoni aseGrike. Xa amajoni amaGrike efika efuna ubutyebi, abafazi bazibulala ngabanye, bahlasela abahlaseli bamaGrike. Kamva kamva, u-Aeneas namadoda akhe baphumelela ngokuphumelela kuloo mzi.
Les Troyens , UMTHETHO 3
Kwibhotwe likaDao, u-Queen of Carthage, udunyiswa ngabantu bakhe. Kwiminyaka esixhenxe eyadlulayo, baye banandipha uxolo olukhulu kunye nokuphumelela ukususela ekubalekeni kwabo kwisixeko saseTire. UDayo, umhlolokazi, uxhala malunga nokukhanyela kwakhe ukutshata no-Iarbas, ukumkani waseNumidia, ngenxa yezizathu zobupolitika, kodwa udadewabo, uAnna uyamqinisekisa ukuba uya kuphinda athole uthando kwakhona ngelinye ilanga.
Intetho yabo iphazamiseka nguYopas xa ezisa iindaba zokufika kweqela elingaziwa lamadoda.
Ekhumbula iingxaki zakhe zokuhamba ezilwandle ezikhohlisayo, uyamkela amadoda esixekweni. Iqela lamadoda lenza inkundla yaseDio kwaye imnike iyokugqibela yobuncwane bayo. Bamxelela ukuba babalekele kunye nesiphelo sabo sokufumana uTroy omtsha e-Italy. Emva koko u-Dido waziswa ukuba u-Iarbas kunye nemikhosi yakhe bahlasele isixeko. Ukwazi ukuba imikhosi yakhe ayinalo manani, u-Aeneas ubonakalisa ubunjani bakhe kwaye unikezela ukunceda ukumkanikazi. Emva kokuba evuma, u-Aeneas wayala unyana wakhe, uAscanius ukukhusela ukumkanikazi.
Les Troyens , ACT 4
Ukwahlula kumadoda, u-Aeneas noDidio bahlala emqolombeni ngaphakathi kwehlathi xa isiqhwithi esinamandla siphezu kwabo. Ama-Nymphs, ama-satyrs, fauns, kunye ne-naiads badlala ngaphandle kwemvula ngeli candelo le-instrumental ye-opera.
U-Aeneas noDidio banikela ekutsaleni kwabo kunye.
Kwiintsuku kamva, u-Anna noNarbal bathetha kwiindawo zokumkanikazi ngoku ngoku ukuba amaNumidians anqotywe. Ukukhathazeka kukaNarbal ukuba ukumkanikazi uyenyelise imisebenzi yakhe, ethanda u-Aeneas. Utshela uAnna unenkxalabo yokuba u-Aeneas akayi kuzalisekisa isigqibo sakhe sokwakha iTroy entsha e-Italy. UAna uyaphendula ukuba u-Aeneas uya kuba yinkosi elungileyo yeCarthage kwaye akukho nkulunkulu okanye isiprofeto esinamandla kunokholo. UDao no-Aeneas bafika kunye noDidio babuza uAneas ukuba balise ibali leentsuku zokugcina zikaTroy. Njengoko akwenzayo, akanakunceda kodwa ukulinganisa phakathi kwakhe nomhlolokazi kaCassandra, uHector. Sekunjalo, abo babini bacula ngokuthandana kwabo. Kwimva kamva, u-Aeneas ukhunjuzwa nguothixo, iMercury, yexesha lakhe lokufumana uTroy omtsha.
Les Troyens , ACT 5
I-Panthee kunye namanye amajoni aseTrojan akhathala ngokuhlala kwabo eCarthage. Emva kokubona izinto ezininzi kunye neziqhamo, abanakuqonda isizathu sokuba u-Aeneas engazange abakhokele e-Italy. Ekugqibeleni, amadoda amaninzi ayesondela ku-Aeneas aze amqinisekise ukuba kufuneka ahambe. Ekugqibeleni bavumelana neenqweno zabo, ubaxelela ukuba baya kusuka ngosuku olulandelayo emva kokutyelela uDidio ngexesha lokugqibela. Ngobo busuku, u-Aeneas uhanjelwa yizivuthu zikaHector, uCassandra, uKoroebus, kunye noKumkani bamncenga ukuba ahambe. Ekugqibeleni, uyavusa amadoda akhe phakathi kobusuku aze abize ukuba balungiselele iinqanawa.
UWayo uva ilizwi lokusondela kwakhe kwaye uhlawulela ukutyelela kuye phantsi.
Ukuthukuthela ngaphezu kokholo, akakholelwa ukuba uya kumshiya. Utshela ukuba uyamthanda ngokwenene, kodwa uyamqalekisa ngaphambi kokuba ahlasele egodini. U-Aeneas, iibhodi eziphazamisekile iintsimbi zabo kwaye zihambe. Ngentsasa elandelayo, epholile, uDoo ubuza udadewabo uAna ukuba amlethe u-Aeneas ukuze ahlale naye ngeentsuku ezimbalwa nje. Xa udade wakhe ebuyela kwibhotwe, utshele uDidio ukuba u-Aeneas kunye namadoda akhe sele sele eshiye. Uvakalelwa kukuba uthengisiwe, uyazisola ukuba akayi kubeka iinqanawa zakhe ngomlilo ngaphambili. Kunoko, uyala i-pyre ukuba yakhiwe phantsi kweendawo apho angatshisa khona zonke izipho zika-Aeneas.
Xa i-pyre iyakhiwa, u-Dido, uAna, noNarbal baqala ukuphosa izipho emlilweni, bathandazela ukuba oothixo babo baqalekise uEeneas. Njengoko akwenza oku, uDao unemibono yelifa eliza kulwa neRoma, liphindezele, kodwa libona ukuba imfazwe ilahlekelwa ngumlingani wakhe. Ngokukhawuleza, uyazibetha ngekrele elikufuphi, eloyikisayo wonke umntu. Uvuma ukuba bonke bazimisele ukufa ngemikhosi yaseRoma, entsha iTroy, emva kokubona umbono wokugqibela.
"Der Hölle Rache" Iingoma kunye neNguqulelo Yombhalo
I-Synopsis yaseTosca: Ibali lePuccini's Famous Opera
I-Albhamu eziphezulu zeLuciano Pavarotti
Iphi i-opera evela
Yintoni Ingcoliseko yamanzi?
Iimpawu zeBlue Supergiant Stars: I-Behemoth yeGalaxies
In-Deep Depth Khangela i-Bluegills
Ukusebenzisa iHarter Potter yokufunda isiJamani
I-Stiff Pen Shell (i-Atrina rigida)
Iingoma zamaKristu Ngendalo kaThixo
High Point GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-Course Handicap: Yintoni na kwaye isetyenziswe njani?
Umzi we-Common Bean (i-Phaseolus vulgaris L)